Machadka Siyaasadda Heritage ayaa Sheegey in Xaaladda Dalka ay Mareyso Meel Halis ah - Awdinle Online
Machadka Siyaasadda Heritage ayaa Sheegey in Xaaladda Dalka ay Mareyso Meel Halis ah
November 12, 2019 (Awdinle Online) – Machadka Heritage ee ka faalooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda uu marayo dalka, gaar ahaan xiisada dowladda iyo Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya, Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud.
Marka ugu horeysa Agaasimaha ee Machadka Cabdirashiid Khaliif Xaashi ayaa ka digay sii socoshada xiisada u dhaxaysa labada dhinac, wuxuuna sheegay in wakhtigan xaaladda siyaasadeed ee dalka ay mareyso meel aad halis u ah.
Wuxuu sidoo kale tilmaamay Agaasimuhu in Soomaaliya aysan xiise u qabin dagaal siyaasadeed ee loo baahan yahay in laga shaqeeyo xasiloonida dalka, isagoona intaasi ku daray in dadka Soomaaliyeed oo la daala dhacaya saboolnimo aysan xamili karin dib u dhac kale oo yimaada qorshooyinkooda.
“Soomaaliya xiise uma qabto dagaal siyaasadeed maadaama boqolkiiba 80% muwaadintiinta Soomaaliyeed ay ku nool yihiin saboolnimo halka boqolkiiba 79% carruurta Soomaaliyeed iskuul ma aadaan.”ayuu yiri agaasomaha Cabdirashiid”.
Cabdirashiid Xaashi waxa uu ugu baaqay dowladda federaalka, gaar ahaan Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo) inuu noqdo shaqsi muqaal u ah Qaran guuleystay, islamarkaana uu ka shaqeeyo horumarka iyo midnimada Soomaaliya.
Ugu dambeyn wuxuu kula taliyey Madaxweynaha inuu xoojiyo dadaalka Al-Shabaab, sidoo kalena uu la heshiiyo Somaliland, Puntland iyo Jubbaland.
“Mudane Madaxweyne Farmaajo waajibaadkaada shaqo ma aha in aad cashar barto siyaasiyiin ee shaqadaadu waa inaad noqoto aabe muuqaal u ah qaran guuldareysatay, Waxaa lagaa rajeynayay in aad heshiis la gaarto Al Shabaab, Somaliland, Puntland, Jubaland, Siyaasiyiinta Muqdisho, Soomaaliya waxa ay u baahan tahay nabad qiime kasta ha ku kacdee.” ayuu ku soo gabagabeeyey, Agaasimaha Machadka Heritage.
Hadalkan ayaa ku soo aadaya, iyadoo xaaladda siyaasadeed ee dalka ay tahay mid kacsan, islamarkaana dhaq dhaqaaq laga dareemayo Muqdisho, kaas oo u dhexeeyo dowladda iyo mucaaradka ay hoggaaminayaan, Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh.
Previous articleDagaal Sababay Dhimasho & Dhaawac oo ka Dhacay Mudug
Next articleFarmaajo iyo Uhuru Kenyatta oo kulmay:- (Sawiro)